China TS-DQ-100 pendant endoskopika ara-pahasalamana elektrika avy amin'ny mpamokatra sy mpamatsy | Wanyu
1. efitrano fiasana
2. Efitra vonjy maika
4. Efitra fanarenana
1. Rafitra mitondra herinaratra
Miaraka amin'ny rafitra mandeha amin'ny herinaratra sy ny sandry voatonona, dia mety amin'ny zavatra ara-pitsaboana izy io, mitsitsy fotoana sy ezaka ara-batana.
Pendant medikaly elektrika
2. Efitra mihodina roa
Sandry avo roa heny, ny halavan'ny sandry dia azo namboarina ary azo ahodina 350 degre, manome toerana malalaka ho an'ny hetsika.
3. Famolavolana fisarahana entona sy herinaratra
Araka ny fenitra iraisam-pirenena henjana, ny faritra misy ny gazy sy ny faritra elektrika dia noforonina manokana mba hahazoana antoka fa tsy hivily na hampidinina tsy nahy ny làlan-tsolika sy ny fantson-tsolika noho ny fihodinan'ny pendant.
4. Fantsona fitaovana
Ny fantsom-pitaovana dia vita amin'ny mombamomba ny alimo alim-pito miaraka amin'ny tanjaka tsara. Misy lalamby vy tsy misy fangarony amin'ny andaniny roa amin'ny fametrahana fitaovana hafa. Ny haavon'ny tray dia azo ahitsy arak'izay ilaina. Ny lovia dia manana zoro boribory miaro.
Pendant medikaly mitaingina valindrihana
5. Fivoahan'ny gazy
Tsy mitovy ny loko sy ny endrik'ilay fampidiran-tsolika hisorohana ny fifandraisana tsy mety. Famehezana faharoa, fanjakana telo (misokatra, mihidy ary tsy mitohana), nampiasa in-20 000 mahery.
Pendant hopitaly any Chine
+ 800mm 600, 600 + 1000mm, + 1200mm 600, 800 + 1200mm, 1000 + 1200mm
Taratra miasa mahomby:
Fihodinan'ny sandry: 0-350 °
Fihodinan'ny pendant: 0-350 °
Pendant Endoscopic Medical Double Arm
Fivoahan'ny gazy oksizenina
Fivoahan'ny gazy karbonika karbonika
Harom-by tsy miova
Previous: QF-JX-300 China ICU pendant Bridge misaraka amin'ny Bridge ho an'ny hopitaly
Manaraka: Fantsona Gas-Medical Double TS-D-100 ho an'ny efitrano fandidiana
TD-Q-100 Endoscopi fandidiana herinaratra tokana ...
TS-D-100 pendantan'ny gasolika medaly elektrika ...
TD-D-100 Taratasy fandefasana herinaratra tokana ...